EUR/USD သတင်း - ယူရိုမှ ဒေါ်လာ ကုန်သွယ်မှု ခန့်မှန်း/သတင်း | ကုန်သွယ်မှုလေ့လာပါ။
ယူရို / အမေရိကန်ဒေါ်လာသတင်း
အခမဲ့ Forex Signals Telegram Groups
ထိပ်တန်း Forex လျှို့ဝှက်ချက်7ခု
Forex Demo ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းများ
အကောင်းဆုံး Forex Trading Platforms
အကောင်းဆုံး Forex အညွှန်းကိန်းများ
Forex Demo အကောင့်
အကောင်းဆုံး Forex Simulator
Forex Trading ၏
Forex Trading ကိုဘယ်လိုစတင်မလဲ။
အကောင်းဆုံး Forex ကွက်
စီမံခန့်ခွဲ Forex Accounts ကို
Forex Trading PDF ကို
အကောင်းဆုံး အခမဲ့ Crypto Signals Telegram အဖွဲ့များ
Bitcoin ကို Credit Card ဖြင့်ဝယ်ပါ
ဒက်ဘစ်ကဒ်နှင့်အတူ Bitcoin ဝယ်ပါ
Bitcoin Cash ကိုဘယ်လိုဝယ်မလဲ။
အကောင်းဆုံး Crypto Trading ပလက်ဖောင်းများ
Binance Coin ကိုဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ
အကောင်းဆုံး Cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်များ
အဆိုပါ Forex Market ကဘာလဲ
Forex Pips ဆိုတာဘာလဲ
Swing Trade မှလေ့လာပါ
ကုန်သွယ်ရေး ဦး ရေပြားမှဘယ်လို
အရောင်းအဝယ်ဖြစ်တဲ့အခါ Margin ဘယ်လိုသုံးရမလဲ
အကောင်းဆုံး Forex Trading Apps များ
အရောင်းအဝယ် Apps များ
စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သွယ်ရေး PDF ကို
Forex Trading ဟလာလ်သည်
အကောင်းဆုံး ပွဲစားများ ဖြစ်ရပါမယ်။
Islam Forex ပွဲစားများ
Forex VPS ပွဲစားများ
Low Spread ပွဲစားများ
အကောင်းဆုံး ASIC ပွဲစားများ
အကောင်းဆုံး CFTC ပွဲစားများ
အကောင်းဆုံး Forex ပွဲစား
အကောင်းဆုံး CySEC ပွဲစားများ
Market Maker ပွဲစားများ
အကောင်းဆုံး FCA ပွဲစားများ
ပုံသေ Spread ပွဲစားများ
မြင့်မားသော Leverage ပွဲစားများ
အကောင်းဆုံး SEBI ပွဲစားများ
Affiliate Program ကို
ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 30, 2022
Euro to Close June By Almost 3% “In the Red” as Risk Flight Worsened
The euro (EUR) continued onabearish trajectory Thursday after losing form against the dollar on Tuesday. The USD enjoyed support from growing safe-haven demand as inflation and global recession worries increased. The single currency currently trades at 1.0410, down by 0.26% in the US session, giving ita48-hour decline of -1%. With that, […]
တနင်္လာနေ့, ဇွန်လ 27, 2022
EUR/USD သည် ဥရောပကုန်သွယ်မှုကာလအတွင်း ၎င်း၏အမြတ်အစွန်းစမ်းသပ်ခြင်း 1.0600 ကို တိုးပေးသည်
EUR/USD သည် ယနေ့ 1.0600 အမှတ်အသားသို့ နီးကပ်လာပြီဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ USD အပေါ် ကျဆင်းနေသော တွန်းအားကြောင့် ဖြစ်သည်။ အာရှနှင့် အမေရိကန် မိတ်ဖက်များထံမှ အင်အားရရှိသောကြောင့် ဥရောပရှိ စတော့ရှယ်ယာများသည် 1% ထက် ကျော်လွန်ခဲ့သည်။ ယင်းကြောင့် ဗဟိုဘဏ်သည် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကျဆင်းလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်း၏ ပြင်းထန်သော နှုန်းထားများ ဆက်လက်တိုးလာမည်ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက ပြန်လည်စဉ်းစားစေခဲ့သည်။ […]
တနင်္ဂနွေ, ဇွန် 26, 2022
ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းမှုစိုးရိမ်မှုများကြားတွင် ဝိုင်ယာကြိုးများပေါ်တွင် EUR/USD
EUR/USD သည် ၎င်း၏မေလအနိမ့်ဆုံး 1.0350 အနီးတွင် ပြန်လည်ဆန်းသစ်ပြီးနောက် သီတင်းပတ်တွင် 1.0600 အောက်အမှတ်အနည်းငယ်ကို ပိတ်ကာ သီတင်းပတ်တွင် အနည်းငယ်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့သည်။ ရောင်းသူသည် မည်သည့် bullish extension ကိုမဆို ခုခံကာကွယ်ထားသောကြောင့် ပျော့ပျောင်းသော အရှိန်အဟုန်သည် 1.0600 အမှတ်အသားကို ဖြတ်ကျော်ရန် ကန့်သတ်ထားသည်။ ပြီးခဲ့သောလအနည်းငယ်အတွင်း၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများသည် စီးပွားရေးကျဆင်းမှုအန္တရာယ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ […]
EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇွန်လ 22, 2022
EUR/USD သည် 1.05330 စျေးနှုန်းအဆင့်သို့ ချဉ်းကပ်လာပြီး၊ အမေရိကန် ဒေါ်လာသည် အားနည်းလာသည်။
EUR/USD သည် နှစ်ရက်ဆက်တိုက် မြင့်မားနေပါသည်။ သို့သော်၊ ရောင်းသူသည် ၎င်းအတွက် အဆင်မပြေမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် 1.0600 စျေးနှုန်းအဆင့်သို့ ရောက်ရန် ကြိုးစားဆဲဖြစ်သည်။ ရေးသားချိန်တွင် EUR/USD သည် 1.0582 ဝန်းကျင်တွင် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး 0.18% ဝန်းကျင်တွင် ကောင်းမွန်သော အထက်ရွေ့လျားမှုကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ စျေးကွက်ခံစားချက်များသည် အခွင့်သာသောကြောင့် ကမ္ဘာ့ရှယ်ယာများ […]
တနင်္လာနေ့, ဇွန်လ 20, 2022
နှစ်ချက်အောက်ခြေဇယားပုံစံ ထွက်ပေါ်လာသည်နှင့်အမျှ EURUSD စျေးနှုန်းတိုးလာနိုင်သည်။
EURUSD စျေးနှုန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း – ဇွန်လ 20 ဝက်ဝံများသည် ပံ့ပိုးမှုအဆင့် $1.04 ကို ဖြိုဖျက်ပါက၊ စျေးနှုန်းသည် ပံ့ပိုးမှုအဆင့် $1.02 နှင့် $1.01 သို့ ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ဝယ်သူများသည် $1.04 ၏ပံ့ပိုးမှုအဆင့်ကိုခုခံကာကွယ်ပါက၊ စျေးနှုန်းသည်ခုခံမှုအဆင့် $1.06 အထက်တွင်မြင့်တက်နိုင်ပြီး၊ ထို့နောက်ခုခံမှုအဆင့်ကိုစမ်းသပ်ရန်အတွက်စျေးနှုန်းမြင့်တက်လာနိုင်သည်။
တနင်္ဂနွေ, ဇွန် 19, 2022
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု အရှိန်အဟုန်ဖြင့် EUR/USD
EUR/USD အတွဲသည် 1.0350 နှင့် 1.0800 ကြားတွင် မကြာသေးမီက မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသော FX စျေးကွက်အတွင်းသို့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဗဟိုဘဏ်များမှ တာဝန်ရှိပါသည်။ ဒေါ်လာကုန်သည်များသည် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကြောက်ရွံ့မှုနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် ဝယ်လိုအားကြားတွင် စုတ်ပြတ်နေသေးသောကြောင့် ဖိုက်ဘာသည် ဤအကွာအဝေး၏ အလယ်အမှတ် 1.0500 တွင် ပြီးခဲ့သောအပတ်တွင် အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က အမေရိကန် […]
သောကြာနေ့, ဇွန်လ 17, 2022
EUR/USD သည် ယူရိုဇုန်ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဒေတာမတိုင်မီ 1.0520 ဝန်းကျင်သို့ ရွေ့သွားသည်။
EUR/USD စျေးနှုန်းလုပ်ဆောင်ချက်သည် စွန့်စားရမှုတွန်းအားပေးပြောင်းလဲမှုတစ်ခုအတွင်း 1.0520 ခန့်သို့ လျှောကျသွားသည်။ သို့သော်လည်း ကုန်သည်များသည် လမ်းညွှန်ချက်များကို ယူရိုဇုန် HICP နှင့် Fed: Powell ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ Eurozone HICP ၏ကြိုတင်ပြင်ဆင်အကဲဖြတ်မှုသည်ယခင်ထုတ်ဝေမှု၏တည်ငြိမ်မှုဖြစ်သည်။ ယူရိုဧရိယာအထက် အင်အားစုများသည် HICP ကို ​​အာရုံပြောင်းခဲ့ကြသည်- […]
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇွန်လ 15, 2022
Eurchf Bear သည် စျေးနှုန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင် ဆက်လက်ပြိုကွဲနေသည်။
EURCHF ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း- ဇွန်လ 14 ရက်နေ့တွင် EURCHF ဝက်ဝံသည် 1.04950 သော့ဇုံကို ဝယ်ယူသူများသည် 1.04950 ကိုဖြတ်ကျော်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ဆက်လက်ပြိုကွဲသွားပါသည်။ XNUMX သည် ကီဝီစျေးနှုန်းအပေါ် ပြင်းထန်သော ခုခံမှုအမှတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်၊ ဝယ်သူများသည် ဤဒေသအထက်တွင် ၎င်းတို့ကိုယ်သူတို့ မရပ်တည်နိုင်ခဲ့ကြပါ။ မျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့သည့်အရာမှာ ပြင်းထန်သော ပြောင်းပြန်လှန်မှုဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ […]
တနင်္ဂနွေ, ဇွန် 12, 2022
ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ပိုဆိုးလာမည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် EUR/USD သည် 1.0500 သို့ ကျဆင်းသွားသည်။
EUR/USD အတွဲသည် 1.0500 ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ကြောက်ရွံ့မှု အနီးရှိ ၎င်း၏ အပတ်စဉ် ဖယောင်းတိုင်ကို ပိတ်ရန် ကျဆင်းနေသော သီတင်းပတ်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ မက်ခရိုစီးပွားရေး ဒေတာအများစုသည် စျေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာခြင်းနှင့် စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို ပိုမိုဆိုးရွားလာစေရန် မီးမောင်းထိုးပြခဲ့ပြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ ပိုမိုလုံခြုံသော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို စုစည်းလာစေရန် လှုံ့ဆော်ပေးပါသည်။ ဥရောပ ဗဟိုဘဏ် (ECB) သည် ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က ဒေါ်လာဈေး တိုးတက်မှုတွင် အရေးပါဆုံး အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။ […]
အင်္ဂါနေ့, မေလ 31, 2022
ယူရိုသည် အားနည်းသောဒေါ်လာများကြားတွင် 2022 တွင် လစဉ်အမြင့်ဆုံး စံချိန်တင်မြင့်တက်မည်ဖြစ်သည်။
ယူရိုငွေသည် အင်္ဂါနေ့တွင် လန်ဒန်စက်ရှင်တွင် အရှုံးပေါ်နေသော်လည်း ၎င်းသည် 2022 ခုနှစ်၏ အကောင်းဆုံးနှစ်ကို ပိတ်ရန် ရွေ့လျားနေသဖြင့် လတစ်လအတွင်း ၎င်း၏ အမြင့်ဆုံးအမှတ်သို့ နီးကပ်နေခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ဥရောပဗဟိုဘဏ် (ECB) တိုးလာစေရန် လှုံ့ဆော်ပေးသည့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဒေတာများကြားတွင် ထွက်ပေါ်လာသည်။ ၎င်း၏ချေးငွေနှုန်း။ ဂျာမဏီမှာ စားသုံးသူဈေးတွေ မြင့်တက် […]
FX ခေါင်းဆောင်များ Forex သတင်းနှင့်မဟာဗျူဟာများ
သင်လိုအပ်သမျှကို Forex News Platform တွင်
Learn2Trade သည်ကုန်သည်များနှင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအားကုန်သွယ်မှုလောကတွင်အောင်မြင်သောလူတစ် ဦး ဖြစ်ရန်လိုအပ်သောအချက်အလက်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အတူတပ်ဆင်ရန်ရည်ရွယ်သော site တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘဏ္tradingာရေးကုန်သွယ်မှုကဏ္successတွင်အောင်မြင်မှုရရန်နယ်ပယ်များစွာတွင်ဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်ကိုနက်နက်နဲနဲနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။
ဤတွင် Learn2Trade ၌ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကုန်သွယ်ရေးအတွေ့အကြုံရှိသောကုန်သွယ်ရေးအတွေ့အကြုံရှိသည့်အဓိကဘဏ္cryာရေးစျေးကွက်များဖြစ်သော cryptocurrencies၊ Learn2Trade ၏နောက်ကွယ်မှအဖွဲ့သည် Forex ပွဲစားတစ်ယောက်၏အရေးပါမှုကိုကောင်းစွာသိရှိထားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲသူများအားဘဏ္worldာရေးကုန်သွယ်မှုလောကတွင်အောင်မြင်မှုရရှိစေရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့်အကြံဥာဏ်များပေးရန်သင့်တာ ၀ န်ကိုကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားသည်။
သင် Forex ဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်ကုန်သွယ်ရေးလောကနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းရှိမရှိဆိုတာပြaနာကင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်ကူညီပေးမည့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံဥာဏ်ကောင်းများကြောင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမည်မှာသေချာသည်။
အရာအားလုံး FX, 24/5
သင့်တော်သောပွဲစားများကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်နှင့်ပြlessနာနည်းပါးစေရန်အတွက်သင့်အားအကောင်းဆုံးကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များပေးရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တာဝန်ယူပါသည်။ သင်၏အကျိုးအတွက်ဘဏ္knowledgeာရေးစျေးကွက်၏ကျွန်ုပ်တို့၏ဗဟုသုတ၊ Forex ပွဲစားများကိုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းများပြုလုပ်ရာတွင်သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကျိုးအမြတ်ကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ရန်ကူညီခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင့်အားလက်မောင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ခြေထောက်တစ်ချောင်းအတွက်ကုန်ကျမည့်မည်သည့်အမှားမျိုးကိုမဆိုရှောင်ရှားရန်ကူညီခြင်း။ သင်တို့အားနောက်ဆုံးပေါ် FX သတင်းများပေးသည်။
Author: မိုက်ကယ် Fasogbon
Last Updated: ဇွန်လ 8th, 2022
Michael Fasogbon သည်ကျွမ်းကျင်သော Forex ကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးငါးနှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသော cryptocurrency နည်းပညာလေ့လာသုံးသပ်သူဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကသူသည်သူ့အစ်မမှတစ်ဆင့် blockchain နည်းပညာနှင့် cryptocurrency ကိုအလွန်အသည်းအသန်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
အချက်ပြမှုတစ်ခုဖွင့်၊ ပိတ်၊ သို့မဟုတ်အသစ်ပြောင်းသည့်အခါတိုင်းအချိန်နှင့်တပြေးညီအချက်ပြအသိပေးချက်များ
အချက်ပြမှုတစ်ခုချင်းစီအတွက် ၀ င်ရောက်ရန်စျေးနှုန်းအဆင့်ဤအရာအားလုံးကိုအခမဲ့ရရှိရန်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောစာရင်းထဲမှထိပ်တန်းပွဲစားတစ် ဦး ကိုသာရွေးပါ။
GBP / USB ဝယ်
လက်လီ CFD အကောင့်များ၏ 75% ပိုက်ဆံဆုံးရှုံး
ယခုအခမဲ့ Signals ရယူပါ!
စျေးကွက်မွမ်းမံမှုများ၊ အထူးအရောင်းမြှင့်တင်မှုများနှင့်သတင်းလွှာများရချင်ပါတယ် ကျွန်ုပ်သည်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီများကိုဖတ်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်ပြီးလက်ခံခဲ့သည်။
အရေးကြီး Links များ
အခမဲ့ Crypto အချက်ပြမှုများ
VIP Forex အချက်ပြမှုများ
VIP Crypto အချက်ပြများ
Block Media Ltd - ၆၇
ခံတပ်လမ်း၊ Artemis အိမ်၊
Grand Cayman၊ KY1-1111၊
learn2.trade ဝဘ်ဆိုက်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram အဖွဲ့အတွင်းရှိ အချက်အလက်များသည် ပညာရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကြံပြုချက်အဖြစ် အဓိပ္ပါယ်မဖော်ပါ။ ငွေကြေးဈေးကွက်များ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းသည် မြင့်မားသောအန္တရာယ်ကို သယ်ဆောင်လာပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအားလုံးအတွက် မသင့်လျော်ပေ။ ကုန်သွယ်မှုမပြုမီ၊ သင်သည် သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရည်မှန်းချက်၊ အတွေ့အကြုံနှင့် စွန့်စားလိုစိတ်တို့ကို ဂရုတစိုက် စဉ်းစားသင့်သည်။ သင်ဆုံးရှုံးရန်ပြင်ဆင်ထားသောငွေနှင့်သာကုန်သွယ်မှု။ မည်သည့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကဲ့သို့ပင်၊ သင်သည် ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအချို့ သို့မဟုတ် အားလုံးကို ဆုံးရှုံးမှုကို ဆက်ထိန်းထားနိုင်သည့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။ သံသယများရှိပါက အရောင်းအဝယ်မလုပ်မီ လွတ်လပ်သောအကြံဉာဏ်ကို ရယူသင့်သည်။ စျေးကွက်များရှိ အတိတ်စွမ်းဆောင်ရည်သည် အနာဂတ်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ညွှန်ပြချက်မဟုတ်ပါ။
Learn2.trade သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram အဖွဲ့များအတွင်း ပံ့ပိုးပေးထားသည့် အကြောင်းအရာကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် တာဝန်မရှိပါ။ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အကောင့်ဖွင့်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်များ မပေးကြောင်းနှင့် စျေးကွက်များတွင် သင်ပြုလုပ်သော ကုန်သွယ်မှုများအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြောင်း အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ မင်းပိုက်ဆံအဆင့်ကို ငါတို့မသိလိုက်ဘူး။
learn2.trade ဝဘ်ဆိုဒ်သည် သင့်အား အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းရန်အတွက် ကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုပါသည်။ cookies များကိုခွင့်ပြုရန် သတ်မှတ်ထားသော သင့်ဘရောက်ဆာဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookie မူဝါဒဆိုင်ရာ အကြောင်းကြားချက်ကို လက်ခံခြင်းဖြင့် သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookie မူဝါဒကို အသေးစိတ်ဖော်ပြသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒကို သဘောတူပါသည်။
2 ကုန်သွယ်မှုအဖွဲ့ကို လေ့လာပါ သင့်အား တိုက်ရိုက်မဆက်သွယ်ပါနှင့် ငွေပေးချေရန် ဘယ်သောအခါမှ မတောင်းဆိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များမှတဆင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] ကျွန်ုပ်တို့တွင် အခမဲ့ Telegram ချန်နယ်နှစ်ခုသာ ရှိသည်။ စာရင်းသွင်းမှုတစ်ခုဝယ်ယူပြီးနောက် VIP အဖွဲ့များအားလုံးရနိုင်သည်။ သင်သည် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ထံမှ မက်ဆေ့ချ်များကို လက်ခံရရှိပါက ၎င်းတို့ကို သတင်းပို့ပြီး မည်သည့်ငွေပေးချေမှုမှ မလုပ်ပါနှင့်။ ၎င်းသည် Learn2Trade Team မဟုတ်ပါ။
မူပိုင်ခွင့် © 2022 learn2.trade
Up ကို scroll
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ join ကွေးနနျးစာ channels
သင်ကြား2Trade Forex ချန်နယ်
သင်ကြား2 ကုန်သွယ်မှု Crypto ချန်နယ်